झापामा प्रहरी नै चढ्छन् चोरीको गाडी !::अनुसन्धान अनलाइन डटकम
तस्करी रोक्नभन्दा सेटिङ मिलाउन व्यस्त ।। बर्दीको आडमा कानुनको धज्जी ।।
खगेन्द्र घिमिरे (खरो)
झापा । समाजमा शान्ति–सुरक्षा र अमन–चयन गराउने कसमका साथ बर्दी पहिरिएका प्रहरीहरु नै चोरीको गाडी चलाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा अन्तर्गत खटिएका सादा पोशाकका प्रहरीहरुले खुलेआम रुपमा चोरीको गाडी चढ्ने गरेको पाइएको हो । चोरीका सवारी पक्राउ गर्ने दायित्व प्रहरीको हो । तर, प्रहरी नै त्यस्ता सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बन्ने गरेको यो घटनाले प्रहरी रक्षक नै भक्षक भएको पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय नम्बर प्लेटमा नेपाली नम्बर हालेर कुदाइएका मोटरसाइकलहरु प्रहरीले बरामद गरी भन्सार दाखिला गर्नुपर्ने हो । तर, झापामा बर्दीको आडमा तल्लो तहका प्रहरीले खुलेआम रुपमा सवारी कुदाइरहेका छन् । तर, माथिल्लो निकाय चुप छ ।
झापा र इलाम क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको आधा दर्जन बढी महँगा मूल्यका चोरीका मोटरसाइकलमा प्रहरीको रजाइँ भएको छ । दिउँसो ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक कामको लागि तथा रातमा तस्करसँग साँठगाँठ मिलाउन यिनै मोटरसाइकल प्रयोग हँुदै आएका छन् । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा चौबिसै घण्टा सडकमा यी सवारी खुलेआम कुदिरहेका हुन्छन् । न कसैले चेक गर्ने डर न सडकमा कुद्न अनुमति नै लिनु पर्ने ।
यातायात कार्यालय मेचीमा कुनै दर्ता नदेखिएका यी मोटरसाइकलमा प्रहरीले आफ्नै तरिकामा नम्वर प्लेट हालेका छन् भने कुनै चोरीकै अवस्थामा फेला परेका नम्वर प्लेटमै कुदाइराखेका छन् । विभिन्न समयमा बरामद भएका मोटरसाइकलहरु आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार चलान गर्नुपर्ने नियम विपरित जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका मातहतका प्रहरी युनिटले यसरी चोरीका गाडी दुरुपयोग गर्नुले कानुन आफ्नै हातमा लिएको भन्दा फरक नपर्ला ।
झापाको चन्द्रगढी, बिर्तामोड, काँकरभिट्टा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी हवल्दारहरुले चोरीका मोटरसाइकलमा नेपाली नम्बर राखेर चढ्ने गरेका हुन् । भारतबाट चोरेर नेपालमा नक्कली ब्लू बुक र नक्कली नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोगमा ल्याइएका गाडीहरु फरक–फरक ब्यक्तिहरुबाट बरामद गरिएका हुन्छन् । यो जानकारी जिल्ला प्रहरीलाई हुन्छ नै ।
इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा अन्तर्गत खटिएका सादा पोशाकका घुमुवा प्रहरी बिष्णु कार्कीले मे ५ प ५८२४ नम्वरको २२० सीसीको निलो पल्सर चढ्दै आएका छन् । यसअघि उनले कालो रङको सुपर स्पेन्डर कुदाउँदै आएका थिए । त्यस्तै को २३ प ७५५ नम्वरको १५० सीसीको रातो पल्सर रेखबहादुर मगर, बिनोद मण्डल र धिरज ठाकुरले चढ्दै आएका छन् । यो भने प्राइभेट सवारी हो ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएका सादा पोशाकका घुमुवा प्रहरी कृष्ण चौधरीले मे ६ प ७१० नम्वरको २२० सीसीको निलो पल्सर चढ्दै आएका छन् । त्यस्तै रमेश खत्रीले मे १० प २९७५ नम्वरको रातो, कालो २२० सीसीको पल्सर चढ्ने गरेका छन् भने भिम बस्नेत र भिम अधिकारीले मे १० प १०३५ नम्वरको १५० सीसीको रातो÷कालो पल्सर चढ्ने गरेका छन् । त्यो केही दिनअघिबाट उनीहरु चढेको देखिन्न ।
सोही रङको को ३८ प ८५७३ नम्वरको पल्सर देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, अखिल कटुवालले मे ७ प ३६६३ नम्वरको रातो सुपर चलाउने गरेका छन् । केही दिन अघिसम्म यही समुहले कुदाउँदै गरेको को ५ प ३६६३ नम्वरको कालो, रातो सुपर अहिले देखिदैन भने इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाबाट घुमुवा प्रहरीले कुदाउने गरेको कालो सुपर पनि देखिएको छैन । प्रहरी जवानहरु आफुखुसी राम्रो बाइक बरामद भएसँगै पुरानो बाइक थन्काउँदै नयाँ चढ्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी कृष्ण कोइरालाले यस बिषयमा चासो नदेखाउँदा खुलेआम रुपमा प्रहरी नै यस्तो गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् । अरुको गल्ती देख्ने प्रहरी आफ्नो संगठनभित्र यस्तो गतिविधि भइरहँदा समेत हेरेर बस्ने एसपी भखरै झापामा जनस्तरबाट सम्मान पाउँदै बिदा भएका छन् । एसपी कोइराला झापामा रहँदा लकडाउन भए पनि नाकामा हुने अबैध गतिविधि रोक्न भन्दा रातको समयमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेर अवैध असुली गर्न लगाए वापतको राम्रो हिस्सा हात पार्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
उनले झापामा मात्रै एक दर्जन बढी सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरेका थिए । जसमा जिल्लाबाट कृष्ण चौधरीको नेतृत्वमा रमेश खत्री, भिम अधिकारी, भिम बस्नेत, अखिल कटुवाल, गुणराज अधिकारी, चेतबहादुर दाहाल खटिएका छन् भने यता तस्करीको मुख्य नाका काँकरभिट्टा क्षेत्रमा बिष्णु कार्कीको नेतृत्वमा रेखबहादुर मगर, धिरज ठाकुर, बिनोद मण्डल, तुलसी कार्की खटिएका छन् । उनीहरु झापाको दक्षिणी भेग र काकँरभिट्टा नाकामा हरेक समय भेटिन्छन । यी मध्ये हरेक महिना अवैध असुली गर्न व्यापारीसँग बिष्णु कार्की र कृष्ण चौधरीले लाइन मिलाउने गरेका छन् ।
यसरी संकलन गरेको रकम आफु केही हिस्सा राखेर इलाका प्रहरी कार्यालय काकँरभिट्टाका इन्सपेक्टर होम अधिकारीलाई जिम्मा दिने र उनले जिल्ला हँुदै माथिल्लो निकायसम्म रकम पुर्याउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । चाडपर्वमा रामै रकम उठ्ने र अहिले सुनसान रहेको घुमुवा प्रहरी स्वीकार्छन् । अघिकारी दमक घर भए पनि लगातार तीन पटकसम्म शक्ति प्रयोग गर्दै झापा आफ्नो सरुवा मिलाउँदै आउने गरेका छन् । पूर्वी नाकाबाट अवैध रुपमा मटर, स्याउ, सुपारी, कपडा, हार्डवेयर, गाईबस्तुको रातको समयमा खुलेआम तस्करी हुँदै आएको छ । तर, प्रहरी रोक्नभन्दा अवैध असुली र लाइन मिलाउन खप्पीस देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नाका बन्द भए पनि यसको प्रभाव खासै परेको छैन । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनेझै घरयासी सामान खरिद गर्न जाने आउनेहरुलाई नाकामा कडाइ गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ । तर, रातको समय ठूलाठूला तस्करी भइरहँदा समेत प्रहरी आँखा चिम्लने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी राकेश थापाले अफिसमा दर्ता गरेर चढ्न दिएको बताए । धेरै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने र भन्सार बुझाउनु अघि केही समय कुदाउने गरको बताए । उनले यस प्रकारको गतिविधि भए सुधार गर्ने बताए । कार्यालयको निर्देशन विपरित आफुखुसी चढ्न पाइँदैन ।
झापा जिल्लामा ३२ वटा ४ पाग्रे सवारी र १०७ वटा २ पाग्रे सवारी साधन नियमित रुपमा प्रयोग हँुदै आएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । तर, त्यस बाहेक पनि बिना ब्लू बुक दजनौँ सावरी साधान खुलेआम चल्दै आएको छ ।
उता प्रदेश नंं. १ प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक ईश्वरबाबु कार्कीले यदि त्यस्तो भेटिए सुधार गर्ने बताए । विभिन्न प्रकृतिमा बरामद भएको सवारी साधनहरु प्रयोग भएको छ÷छैन भन्ने बिषयमा आफु तत्काल बुझ्ने बताए ।
अरुलाई नियम सिकाउने कानुनको कुरा गर्ने प्रहरीले यसरी कानुनको धज्जी उडाउने गरेको देखिन्छ । यसतर्र्फ हालसम्म कसैको ध्यान गएको छैन । यसले गर्दा प्रहरी जनताको भन्दा पनि तस्करीसँग मिलेर कमाउ धन्दामा व्यस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो रोक्न प्रहरीका उच्च स्तरबाट कदम नचाल्ने हो भने जनताले विश्वास गर्ने वातावरण दिन प्रतिदिन घट्ने सम्भावना देखिन्छ ।